CYBER MONDAY 2022 pamapiritsi uye iPad: zvakanakisa zvinopihwa
Kutora mukana wekuti iwe unotenga kubva kune yako smartphone kana komputa yako, unogona kutora chizvarwa chekupedzisira piritsi kana nyowani yepamusoro-yekupedzisira nharembozha sezvausati wambofungidzira kare. Inguva yako, iCyber ​​​​Monday.
Heino kusarudzwa kweakanakisa mapiritsi akadzikisa zvakanyanya mutengo paCyber ​​​​Monday yegore rino:
Cyber ​​​​Monday 2021 paMahwendefa
Kana iwe uchida kuona zvimwe zvekutengesa pinda pano kuti uone zvimwe zvakaderedzwa pamahwendefa eCyber ​​​​Monday. Inochinja miniti yega yega!
Ona zvimwe zvinopihwa zveCyber ​​​​Monday
Mapiritsi emhando dzatinogona kutenga zvakachipa paCyber ​​​​Monday
Cyber ​​​​Monday inopa
Zvakaoma kutenda kuti kambani yeChinese ichangopfuura makore makumi matatu yakatokwira kusvika padanho remakambani makuru ehunyanzvi epasi rose. Uye ndizvo zvakaitwa naHuawei, chikamu chekutenda kumakore gumi apfuura umo akazvinyudza zvizere munyika yenharembozha uye mamwe marudzi emidziyo yakangwara.
Mapiritsi avo anofarirwa zvikuru uye panguva ino yeCyber ​​​​Monday tichavawana vaine mitengo inonetsa kuramba, kunyanya tichitarisa kuti inenge yatove yakasimba mukati megore rose.
Iyo kambani yeapuro yakatanga nekugadzira makomputa, asi kweanopfuura makore gumi yakave yakakurumbira nekuda kwekuve iyo iri kumashure kwe iPhone, iyo smartphone yakaisa kosi nyowani.
Tafura yake ndiyo iPad, iyo zvakare yakaisa maitiro, uye isu tinogona kuiwana nekutengesa panguva yeCyber ​​​​Monday. Asi chenjera, Apple haina kudhura uye zvakaderedzwa zvinopihwa kazhinji hazvina kukosha seizvo zvemamwe mhando.
MaSouth Korea anga ari mucherechedzo munyika yemagetsi kwemakumi emakore akawanda, kunyangwe pakutanga taivaziva zvakanyanya zvemidziyo yemumba.
Zvino, pamusoro pezvese zvavakaita, senge makomputa, maPC, makamera uye nezvimwe, ivo vane basa kune mamwe akanyanya kukosha Android terminals, uye izvi zvichave zviripo muzvitoro zvakawanda panguva yeCyber ​​​​Monday nemitengo kuva pedyo kana kudarika 20%.
Lenovo inobvawo kuChina, kambani iyo vakawanda, kunyanya vashoma vanonzwisisa, haina kunaka. Uye inopa zvigadzirwa zvakangwara zvakanyanya nemitengo yakaderera, ndicho chikonzero vamwe vanotenda kuti imhando yakaipa, asi izvi handizvo; inoitawo zvemhando yepamusoro, zvinhu zvinodhura.
Pakati pavo tine nharembozha uye mahwendefa, uye panguva yeCyber ​​​​Monday mitengo yakanaka yavanopa ichave iri nani.
Zvakaomawo kutenda zvakaitwa naXiaomi, asi kwete zvakanyanya kana tikafunga kuti yakatevera nzira imwechete neyayo Huawei. Vakawanawo mukurumbira wekupa zvigadzirwa zvine mutengo wakanaka wemari, uye zvakabatsirawo kuti zvigadzirwa zvavo zvifanane neaApple, nekuda kwekupokana.
Mahwendefa avo akafanana chaizvo nePadad uye panguva yeCyber ​​​​Monday tinogona kutenga iyo "iPad ine Android" ine discounts inogona kudarika 30%.
Ndeipi Cyber ​​​​Monday 2021
Tinofanira kuziva kuti Cyber ​​​​Monday izuva rinobuda kubva kune yakakurumbira tsika yeBlack Friday. Saka, izuva risingazivikanwe uye rakapembererwa kwenguva shoma. Muchokwadi, ichangoburwa, asi haiodza mwoyo vashandisi nevatengi, asi iri kuwana vateveri nevateveri. Ichave yakafanana, asi haina kufanana, uye vatengi vanozviziva. Kukwanisa kutora mukana wakazara wezvakanakira uye mabhenefiti uye kuziva nzira yekunakidzwa nekubwinya kwayo kwese mumutsara wepamberi. Uye chinhu chakanakisa ndechekuti isu hatizofanira kumuka mangwanani kuti titore mota toenda kunzvimbo yekutengesa, kana kubuda kuenda kumugwagwa kunotsvaga mahwindo nezvitoro, isu tichazviita kubva pasofa yedu. Asi Cyber ​​​​Monday ichave riini? Zuva rayo rinogona kusiyana zuva nezuva, sezvo isiri nhamba yakatarwa inodzokorora nekufamba kwenguva. Zvisinei, inogara ichipembererwa mazuva matatu mushure meBlack Friday, sezvo iri musi weMuvhuro, uye zvakare, Black Friday inopembererwa zuva rinotevera kupemberera Thanksgiving. Nechikonzero ichi, gore rino Cyber ​​​​Monday inopembererwa munaNovember 29. Uye Black Friday ichapembererwa munaNovember 26.
Mazuva maviri ausingafaniri kukanganwa kunyora pakarenda yako, nekuti kana asvika iwe unofanirwa kunge wakagadzirira, zvizivise iwe nezvezvakanakisa zvitoro zvekunakidzwa nazvo uye usarasikirwe mune chero chinhu. Zvizhinji zvinopihwa nekukurumidza uye zvekukurumidza zvinorova mawebhusaiti seAmazon, Fnac, Mediamarkt, nezvimwe. Kana iwe uchikahadzika zvakanyanya, pamwe ivo vanoenda uye haugone kuvawana zvakare. Kuti uvandudze midziyo yekombuta yako, tora icho chigadzirwa chawakamirira kwenguva yakareba kana kuti uvandudze wadhi yako uye wadhiropu, nhasi haufanirwe kurara.
1 Cyber ​​​​Monday 2021 paMahwendefa
2 Mapiritsi emhando dzatinogona kutenga zvakachipa paCyber ​​​​Monday
3 Ndeipi Cyber ​​​​Monday 2021
5 Cyber ​​​​Monday pamapiritsi
6 Cyber ​​​​Monday iPad uye Apple
7 Kwaunowana madhiri epiritsi eCyber ​​​​Monday
Isu tese tinoziva kuti kune rimwe zuva pagore rinouya kuzotiunzira zvakanakisa zvinopihwa uye zvakanyanya kunaka zvidzikiso. Zuva iroro rinongova mwedzi mumwe chete kubva paKisimusi, uye rinozivikanwa seBlack Friday, rinonziwo Black Friday muchiSpanish. Asi zuva iro handiro chete ratinogona kutora mukana wekubatsirwa kubva kune zvinopihwa uye zvideredzwa. Mabhizinesi mazhinji uye zvitoro zvakawanda zvinosarudza kuwedzera miganho mukupera kwesvondo rese, kunyangwe kusvika Muvhuro. Nekudaro, Muvhuro harisi rimwe zuva regore uye haisi nguva yekupedzisira kuwana zvideredzwa. Mhemberero yakasarudzika yakazvarwa kubatsira vatengi nevatengi kuvimba mune zvakanakira kutenga kwedhijitari uye kuvadzidzisa kunharaunda yezvishandiso uye mawebhusaiti ekambani. Mhemberero iyoyo inonzi Cyber ​​Mbudzi uye inoratidzirwa nekuunza zvese zvakanakira zveBlack Friday zvakare, kudzimisa kana kuisa pfungwa pazviri neimwe nzira kunharaunda yedhijitari.
MuSpain, Cyber ​​​​Monday kana Cyber ​​​​Monday haina kunyanya kuzivikanwa seyakatangira, asi mabhizinesi mazhinji nezvitoro zvave kutotanga kuiisa mukarenda yavo. Vatengi nevatengi vanoziva zuva rino vanobatsirwa nezvipo zvaro uye zvidzikiso, pasina kusimuka kubva pasofa kana kunyange kubva pamubhedha. Kubva kumba, uchiona zvigadzirwa uye ruzivo rwese rwezuva rino, unogona zvakare kutora zvigadzirwa zvaunoda nemitengo isingakundike. Kubva pakutenga kisimusi kusvika pakutenga chimwe chinhu chakakosha kunhengo yemhuri kana shamwari.
Takatokurukura kuti mazuva aya anorevei pamusika, makambani nevatengi. Asi hazvigumiri ipapo, sezvo paine misiyano yakati wandei yekufunga nezvayo. Chikuru ndechekuti haizove nzira yekutenga yakafanana mune ese ari maviri. Ndiko kuti Black Friday Iro izuva guru rekutenga, icho ichokwadi, asi izvi zvinotengwa zvinonyanya kunanga pamusika wechinyakare, vagari venzvimbo, mabhizinesi, zvitoro zvenyama uye zvivakwa. Izuva iro munhu wose anoenda muuzhinji kunzvimbo huru dzezvitoro ndokukweva kadhi kuti atore kutengwa kwese kwezvipo zveKisimusi, zvipo zvezuva rekuzvarwa uye dzimwe mhemberero dziri kuuya. Mari yekuchengetera yakakosha uye dzimwe nguva inodhura. Mabhureki ekutanga pamitengo haana kumboonekwa kwavari. Pasina kupokana iyo yakanakisa kudai kune chero mutengi, ingave yakakwirira kana yepakati simba rekutenga, kunyangwe kune avo vane yepakati-yakaderera simba rekutenga nhanho, sezvo ichivabvumira kutenga izvo zvigadzirwa izvo priori yaiita senge isingagoneki, asi kuti kamwe chete pagore zvinosvika. ruoko mumaoko. Iyi yese iBlack Friday, ndosaka vanhu vazhinji vachifarira zuva rino. Kune rimwe divi, Cyber ​​​​Monday, kunyangwe ichichengetedza zvese izvo zvakanaka, inogumira kana zvasvika pakukunda, kana kuti, inotarisa pamunda wekutengesa online.
Cyber ​​​​Monday ichatiunzira zvakanaka zvinopihwa, senge Black Friday, asi ichabva kumaapplication, mapuratifomu uye mawebhusaiti ezvitoro nemabhizinesi. Zvichida chimwe chitoro chinoenderana nemitengo iyoyo muzvitoro zvenyama, asi zvine musoro zvezuva rino kukura kwekutengesa kwepamhepo. Pfungwa iyi ndeye kujaira vatengi kutenga kubva kumba uye kutenga zvigadzirwa online. Bvisa kusava nechokwadi, kusachengeteka uye kutya kuti kutenga kwepamhepo kunogona kuunza kune mushandisi uye gadzirisa iyi nzira iri kuwedzera uye yakapararira mazuva ese. Uye pasina mubvunzo inobudirira, nokuti mitengo yayo nemamiriro ezvinhu zvakakura.
Hapana zuva rimwe riri nani pane rimwe, asi kune zuva rine nzira yekutenga yakasiyana pane imwe. Kana iwe uchida kutenga muchitoro chepanyama, pamwe Black Friday ichakubhadhara iwe, asi kana iwe uchida kutenga kubva kumba uye unakirwe nezvinopihwa, Cyber ​​​​Monday izuva rako.
Cyber ​​​​Monday pamapiritsi
Pane zvese zvigadzirwa zvinogona kutengwa iyi Cyber ​​​​Monday, pane chikamu chimwe chinohwina mubairo wekutanga gore negore: computing. Uye ndiani anoti komputa, inovhara iyo yese ndima yemakomputa, mahwendefa, smartphones uye akasiyana ma accessories anoperekedza. Kubva pawachi dzakangwara, wachi dzemitambo, magirazi echokwadi chaiwo uye mitambo yekunyaradza. Zvese izvi zvinoturikira muzvigadzirwa zvinodhura zvekuti, kana zvichiperekedzwa nekudzikiswa kwakakosha, zvinoyevedza uye zvinotowanikwa kune vatengi. Kazhinji mushandisi haagutsikane kumutsiridza komputa yake kana piritsi nekuda kwemutengo, asi Cyber ​​​​Monday inounza zvidzoreso uye inopa zvakanaka zvekuti zvinoita sekunge zvisingaite hakusi kuitenga, nekuti dzimwe nguva inobhadhara chaizvo kuenda kune imwe. chitsva . Tiri kutaura nezvezvipo zvinogona kunge zviri 21% pamapiritsi nemakomputa, kureva, iyo VAT muzana munyika yedu. Kuderedzwa kusingaenzaniswi.
Uye pamwe kutaura kuti iri gumi kana makumi maviri muzana haina kunyanya kushamisa pakutanga kuona, asi isu tiri kutaura nezve zvigadzirwa zvinogona kubva ku10 kusvika € 20 mune iyo Apple's iPad. Chigadzirwa chiri kudiwa zvakanyanya gore rega rega paBlack Friday uye Cyber ​​​​Monday. Tinogona kuchengetedza kubva ku400 euros kusvika ku1200, zvichienderana nekupa, pamwe zvimwe. Zvese zvinoenderana nebhizinesi ratinowana chigadzirwa uye chinopihwa chatinotevera. Iyo yakanyanya kukurudzirwa tekinoroji muSpain inogona kuve Fnac, Amazon uye mamwe akadai sePC Zvikamu.
Cyber ​​​​Monday iPad uye Apple
Sezvatareva, izuva rekutenga online. Nechikonzero ichi, zvigadzirwa zvinonyanya kudiwa ndezviya zvekombuta, tekinoroji, mafoni ... Uye ndezvekuti vashandisi vepamberi mumapoka aya ndeavo vanonyatsoziva zuva rino rekupa uye avo vane mukana kana zvasvika pakugadzirisa. kune kutenga kwepamhepo tenga kare mumaapplication. Izvi zvaita kuti makambani mamwe chete aratidze zvigadzirwa zvetekinoroji pamusoro pezvimwe.
Uye makambani akaita seAmazon kana Fnac anotipa zvakanaka zvinopihwa zvinotikoka kuti tivandudze michina yemakomputa kana kuwana mahwendefa emazuva ano pamusika, ayo anototitendera kushanda sekunge ari makomputa. Kana iwe wagara uchida Apple iPad kana uri kufunga kuita kusvetukira kune itsva iPad Pro, iri zuva ndiro rakakunakira iwe. Unoitenga kubva kumba kwako uye ichauya nemutengo usina kumboonekwa. Zvakawanda zvinokwanisika, zvakachipa, zvakawanda zvekuchengetedza. Mahwendefa eApple angaita seanodhura, asi kune mamodheru kune vese vateereri uye kune ese marudzi ebhajeti. Kana kusvika ikozvino waifunga kuti yanga isiri mukati mekusvika kwako, imhaka yekuti hausati wazviona nezvidzikiso zvakasiyana zvemawebhusaiti anotora mukana weCyber ​​​​Monday.
Muvhuro unotevera, Mbudzi 29, gara wakatarisa kune ako aunofarira ekutenga mawebhusaiti uye usapotsa mukana uyu.
Kwaunowana madhiri epiritsi eCyber ​​​​Monday
Amazon: Vazhinji vedu tinoziva Amazon kune yayo hyper-yakakurumbira online chitoro, asi zvakare inozivikanwa kune yayo gore. Chero zvazvingava, chinhu chinonakidza apa iCommerce yako, zvichida inonyanya kukosha munyika. Mariri tinowana marudzi ese ezvinyorwa, pasina chero chakakosha chinomira pachena, senge mbozhanhare uye mahwendefa. Nezvekupedzisira, tinogona kuwana marudzi ese, kubva kuApple ine simba uye inodhura iPad, kuburikidza nemapiritsi eAroid ane kukosha kwakanakisa kwemari uye kupedzisa neayo evana vane masimba evabereki. Ese achange ari kutengeswa panguva yeCyber ​​​​Monday, kunyanya iwo emhando dzatova nemutengo wakanaka mukati megore rose.
Dare reChirungu: iyi cheni yezvitoro inomira kunze kwechikamu chefashoni, kubva kwainowana zita rayo. Asi zvakare inopa zvimwe zvigadzirwa, senge izvo zvine chekuita nemagetsi. Inowanikwa muzvitoro zvikuru mumaguta uye mushanduro yayo yepamhepo, El Corte Inglés ine mafoni uye mahwendefa mukatalogi yayo, mamwe anozove nemutengo uri nani panguva yeCyber ​​​​Monday.
Worten: Haina mukurumbira sechimwe chitoro chakasarudzika, asi Worten isarudzo huru kana isu chatiri kufarira chiri kutenga chinhu chine chekuita nemagetsi. Vanosvika vachibva kuPortugal, uye vanoshanda munyika yakavakidzana nayo kumadokero uye muSpain yose, iyo inosanganisira zvitsuwa. Hunhu hwavo uye chikonzero chavo chekuve ndezvemagetsi, uye zvese zvavanopa vanozviita nemutengo wakanaka. Mutengo iwoyo uchanyanya kunakidza panguva yeCyber ​​​​Monday, kwatinogona kuwana mahwendefa emarudzi ese ane zvidzikiso zvinozonetsa kuramba.
mediamarkt: Wakambonzwa kana kuona here slogan inoti "Handisi benzi"? Ndiyo inoshandiswa neMediamarkt kutiratidza kuti kutenga muzvitoro zvavo idanho rakangwara. Ivo vanobva kuGermany uye inyanzvi dzezvinyorwa zvemagetsi, saka mukatalogi yavo tinowana terevhizheni, makomputa, vacuum cleaners, midziyo yemumba uye nezvimwe, izvo zvinowedzerwa mazuva ano anozivikanwa mafoni uye mahwendefa. Zvese izvi zvichave zvakatonyanya mutengo panguva yeCyber ​​​​Monday, ine zvidzikiso izvo, zvichienderana nezvakasarudzwa, zvinogona kutemwa kusvika hafu.
mhaswa: kubva kunyika yakavakidzana, asi munyaya iyi iyo yatinayo yekuchamhembe, Carrefour inosvika kwatiri. Aimbozivikanwa seContinente, zvitoro zvedhipatimendi kana mahypermarket kwatinogona kuwana chero chigadzirwa, kusanganisira chikafu chatinogona kutenga chero zuva. Mitengo yainopa inowanzova yakanaka mukati megore rose, asi ichanyanya kunakidza muzvinhu zvemagetsi panguva yeCyber ​​​​Monday, nguva uye kupi kutenga piritsi kuchava kubheja kwakachengeteka.
Mahwendefa akadhura » Bids » Mahwendefa eCyber ​​​​Monday 2021